Wararka Gudaha – Page 253 – Shabakadda Amiirnuur
Mareykanka oo Maatidii Uu Ku Gumaaday Bariire Ku Tilmaamay Cadaw!
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Maraykanka ayay si cad oo gambasho lahayn waxay ugu sheegtay in dadkii 25 Ogosto ee sanadkan lagu xasuuqay duleedka deegaanka Bariiri ahaayeen dad hubeysan oo cadow ah. Warkan oo ay soo saareen guddi loo xilsaaray inuu baaritaan ku sameeyo arintaas oo katirsan taliska […]
Wargeys Laga Leeyahay Mareykanka oo Sheegay In Dowladdoodu Gumaad Ka Geysatay Soomaaliya.
Iyadoo warbaahinta Mareykanka ay bilihii lasoo dhaafay baahinayeen warar ay ku marin habaabinayeen dhacdooyinkii gumaadka ahaa ee ay ciidamada dalkaasi ka geysanayeen Soomaaliya ayuu maanta mid kamid ah jaraa’idka wadankaasi wax ka qoray arrimahaas. Wargeyska lagu magacaabo Daily Besat ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in baaritaano ay sameeyeen ay […]
Al-Shababa oo Dagaal Kula Wareegay Degaan Ka Tirsan Hiiraan.
Ciidamada Al-Shabaab ayaa maanta weerar culus ku qaaday askar ka tirsan kuwa Liyu Boliska ee u shaqeeya Itoobiya oo ku sugnaa degaanka Ceel-cadde ee duleedka magaalada Baladweyne. Dagaal muddo socday kadib waxay ciidamada Liyu Bolisku isaga carareen degaanka taasoo sababta in ay Al-Shabaab la wareegaan gacan ku heynteeda sida ay […]
Dhageyso Mid Kamid Ah Wasiiradii Uu Magacaabay Waare oo Durbadiiba Is Casilay.
Saacado kadib markii uu hogaamiyaha Hir-shabelle Maxamad Cabdi Waare ku dhawaaqay golaha wasiirada ayaa waxaa durbadiiba is casilay mid kamid ah golaha. Wasiiru dowladahii wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta ayaa galinkii dambe ee maanta saxaafadda isugu yeeray wuxuuna u sheegay inuu iska casilay xilka loo magacaabay. Ismaaciil Muxamad Culusow ayaa is […]
Sawirro+Warbixin: Qeybta 3-aad Ee Barwaaqa Sooranka Baadiyaha Soomaaliya.
Walaalaha aynu jecelnahayow waxaan maanta qeybta 3-aad ee warbixinta (Barwaaqa Sooranka Baadiyaha Soomaaliya) ku eegi doonnaa baadiyaha Sh/hoose, innagoo idiin soo gudbineyna warbixin aynu uga sheekeeneyno wixii aanu soo aragnay taasoo dabcan sawirro wadata. Halkan Ka Degso Warbixinta Xigasho: radioalfurqaan.com
Sadax Gaari oo Kenya Looga Gubay Lamu Kadib Caleema Saarkii Uhuru.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta weerar dhabba gal ah u dhigay gaadiid ay wateen ciidamada Boliska ee dowladda Kenya, waxaana weerarkan ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Weerarka oo ka dhacay wadada isku xirta deegaannada Wittu iyo Gamba oo ka tirsan Lamu ayaa waxaa askarta Boliska ee […]
Degdeg: Dagaal U Dhaxeeya Al-Shabaab Iyo Amisom oo Ka Dhacay Qoryooley.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in duleedka magaalada ay goor dhow ku dagaalameen ciidamada milatariga Al-Shabaab iyo kuwa Amisom. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii askarta ay shabaab ay weerar ku qaadeen Amisom, waxaana in muddo ah si toos ah la isku […]
Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Gaas iyo kan Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis-Abbaba ee Dalka Itoobiya, sida ilo lagu kalsoon yahay ay sheegeen. Kulanka ayaa looga hadlay qiimaynta xaalada dalku Soomaaliya uu marayo, xiriirka maamul goboleedyada iyo dawlada Federaalka ah iyo mooshinka la doonayo […]
Suuqa Gaalkacyo oo Maanta La Furay Sadax Maalmood Kadib oo Uu Colaad U xirnaa.
Suuqa magaalada Gaalkacyo oo muddo sadax maalmood ah u xirnaa colaad dhx martay laba malleyshiyo oo ka wada tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta dib loo furay. Wararka ka imanaya Gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in ganacsatadu billaabeen iney furan mehradahooda halka dad weynuhuna dukaameysanayaan kadib markii waan-waan ay sameeyeen […]
Australia oo Tuhun U Xirtay Nin Soomaali Ah.
Xilli ay dowladaha gaaladu isku diyaarinayaan u dabaal degga ciidooda Kirismiska ayaa waxaa jira baqdin ay ka qabaan dhanka ammaanka, waxaana dal walba uu ciidamo gaar ah u xil saaray ka hor tagga weerarada ay macquulka tahay iney geystaan dadka Muslimiinta ah. Ciidamada Boliska ee dalka Australia ayaa xabsiga u […]
« Previous 1 … 251 252 253 254 255 … 260 Next »